Arch Linux 2020.01.01, yekutanga vhezheni ye2020 inosvika neLinux 5.4 | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri vekuparadzirwa kweLinux kwevashandisi vepamberi vaburitsa Arch Linux 2020.01.01. Iyo nyowani vhezheni, iyo sezvatichatsanangura gare gare yakagadzirirwa kumisikidza nyowani, inouya neiyo huru hunyanzvi hweiyo kernel Linux 5.4, kernel yakaburitswa mukupera kwegore iyo ichangopera. Dzimwe dzese nhau, senguva dzose, zvinoenderanawo neshanduro nyowani yesoftware inoshandiswa neumwe weakakurumbira ekuparadzirwa kweLinux.
Kunyanya kutaura, iyo kernel yavakaisa muArch Linux 2020.01.01 iri Linux 5.4.6, iyo kusvika munguva pfupi yapfuura yaive yekupedzisira yakagadzika vhezheni (parizvino iri v5.4.8 yekernel). Pakati pemabasa matsva akaisirwa mukernel nyowani isu tine gakava rekuchengetedza rinozivikanwa se "Lockdown", asi timu yekuvandudza haina kutaura kana vakagonesa basa racho kana kuti vakasiya richiomeswa sezvo richingosvika nekumira. Iyo zvakare inovandudza rutsigiro rweMicrosoft's exFAT faira system uye inovandudza ndangariro manejimendi muApple.
Arch Linux 2020.01.01 iri, senguva dzose, iyo Rolling Kuburitswa
Sezvo isu tanga tambotsanangura, Arch Linux 2020.01.01 ndiyo chaiyo ichangoburwa sisitimu yekushandisa ISO mufananidzo uye yakagadzirirwa chete kumisikidza nyowani kana, mune mamwe mazwi, kudzoreredza sisitimu. Arch Linux inoshandisa modhi yekuvandudza inozivikanwa se Kutenderera Kuburitswa, zvinoreva kuti mushure mekutanga kuisirwa, iwe uchagashira izvo zvinogadziridzwa zvachose kubva kune imwecheteyo inoshanda sisitimu.
Arch Linux 2020.01.01 inosanganisira zvese zvidzoreso zvakasanganiswa nehurongwa hwekushandisa mumwedzi wapfuura, kusanganisira akagadziridzwa mapakeji, zvigamba zvekuchengetedza pamwe neshanduro dzichangoburwa dzekushandisa.
Vashandisi vanofarira vanogona kurodha pasi iyo itsva ISO mufananidzo kubva Iyi link. Vashandisi varipo vanogashira kana vanofanirwa kunge vakatogamuchira zvese zvinogadziriswa zvinosanganisirwa mune iyi ISO Kuti uve nechokwadi, iwe unogona kugara uchivhura terminal uye nyora yekuvandudzwa kuraira "sudo pacman -Syu".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arch Linux 2020.01.01, yekutanga vhezheni ye2020 iri pano neLinux 5.4
Iyo Lockdown inobvisa iyo nyasha kunze kwe linux, asi hei, kuenderana neEexfat uye mafaera eApple anokosheswa.
SuperTuxKart 1.1 inosvika nemaseketi matsva, interface uye kugadzirisa iyo online mode